कैटरीना र साहिदबीच प्रेम
Monday, 25 June 2012 20:24	नागरिक
(5 votes, average 3.40 out of 5)
मुम्बई, असार ११ (एजेन्सी)- आफ्नो पूर्व प्रेमीका अरु कोही केटासँग प्रेममा परेको सुनियो भने के होला? पक्कै असहैया हुन्छ। यस्तै भएको छ, बलिउड स्टार सलमान खानलाई। उनको पूर्व प्रेमिका कैटरीना कैफ साहिद कपुरसँग प्रेममा परेपछि उनको टाउको दुखाई भएको छ। नवभारत टाइम्सका अनुसार सलमान अहिले साहिदलाई सिधा आँखाले हेर्न सक्दैनन्।
करिश्मालाई छोरी साथी बराबर
Monday, 25 June 2012 09:08	नागरिक
(9 votes, average 1.00 out of 5)
काठमाडौं, असार ११ (नागरिक) - अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर सार्वजनिक कार्यक्रममा अक्सर छोरी कवितासँग देखिन्छिन्। उनलाई १७ वर्ष टेकेकी छोरी 'साथी बराबर' लाग्छ।
दवङ्ग २ को सेटमा विस्फोट
Sunday, 24 June 2012 14:13	नागरिक
मुम्बई, असार १० (एजेन्सी) - सलमान खानको फिल्म दवङ्ग २ को सुटिङमा विस्फोट हुँदा फिल्मका तीन प्राविधिकहरु घाइते भएका छन्। मुम्बईको महेवुव स्टुडियोमा सुटिङ भइरहँदा सर्ट सर्किटका कारण विस्फोट भएको हो। विस्फोटपछि हिजै घाइतेहरुलाई नजिकैको लिलावती अस्पताल उपचारका लागि लगिएको थियो। वलिउड हङ्गामाका अनुसार दवङ्ग २ को एक्सन सिक्वेन्सको सुटिङ चलिरहेको थियो।
राजेश खन्ना अस्पताल भर्ना
Saturday, 23 June 2012 19:44	नागरिक
मुम्बई, असार ९ (एजेन्सी) - बलिउडका सुपरस्टार रहेका राजेश खन्ना केही समययता सिकिस्त भएको खबर फैलिएको थियो। उनको अवस्था खराव नभएको भन्दै खन्नाका ज्वाई तथा बलिउड स्टार अक्षय कुमारले समाचारको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले राजेश खन्ना स्वस्थ रहेको र उनीबारे फैलिएको हल्ला झुटो भएको दावी गरेका थिए।
हरिवंशले गरे दोस्रो विहे
Friday, 22 June 2012 08:58	नागरिक
(31 votes, average 3.65 out of 5)
काठमाडौं, असार ८ (नागरिक)-अभिनेता हरिवंश अचार्यले दोस्रो विहे गरेका छन्। बिहीबार गोगंबु,टोखामार्गमा उनले बुटवलकी रमिला पाठकसंग विवाह गरेका हुन्।
पहिलो श्रीमती मिरा आचार्यको निधन भएको साढे १ वर्षपछि उनले विधुवा रमिलासंग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका थिए। १२ वर्षदेखि विधुवा रहेकी रमिला हरिवंशभन्दा १० वर्ष कान्छी छिन्।
४६ वर्षपछि नेपाली गीतमा लता
Friday, 22 June 2012 08:51	नागरिक
दीपेन्द्र लामा, काठमाडौं, असार ८- सात दसक भारतीय फिल्म उद्योगमा छाउँदै आएकी सदाबहार गायिका लता मंगेशकरले लगभग ४६ वर्षपछि तेस्रो नेपाली गीत गाएकी छन्। आनन्द अधिकारी रचित 'फूल भन्छ फुलिरहूँ, जून भन्छ चम्किरहूँ' बोलको गीत लताले तीन साताअघि मुम्बईमा रेकर्ड गराएकी हुन्। मुम्बईको अँधेरी वेस्टस्थित स्वरलता स्टुडियोमा लताले संगीतकार शिखर सन्तोषको कम्पोज रहेको गीत एकल र रामकृष्ण ढकालसँग युगल गरेर दुईपटक गाएकी छन्।
राजेश खन्नाले भने - म सन्चै छु
Thursday, 21 June 2012 21:55	राजेन्द्र ज्ञवाली
मुम्बई, असार ७ (एजेन्सी)-आफ्नो स्वास्थ स्थिति खराब रहेको हल्ला चलेपछि राजेश खन्ना स्वयं संचार माध्यम समक्ष आए र प्रशंसकहरूका लागि आफ्नो विशेष शैलीमा हात हल्लाउदै सन्देश दिए -म सन्चै छु। ६९ वर्षीय खन्नाले आफ्नो घरको कौशीमा हसिलो मुद्रामा आए र प्रशंसकहरूको अभिवादन स्विकार गर्दै आफू निको भएको बताएका हुन्।पछिल्लो केही समय देखि खन्नाको स्वास्थमा समस्या देखिएको भन्ने खबरबीच उनको स्थिति नाजुक भएको हल्ला चलेको थियो। कौशीमा उनीसँग डिम्पल कपाडिया र ज्वाइ अक्षय कुमार पनि थिए। पछि अक्षयले पनि आफ्नो ससुरा सन्चै भएको कुरा बताएका थिए। त्यसअघि खन्नाका व्यवस्थापक अश्विनले उनी विरामी भएको बताएका थिए। राजेशले तिन चार दिन देखि खान छाडेको उनले बताएका थिए। खन्ना अप्रेलमा पनि यस्तै विरामी भएका थिए। पिठ्यूमा भएको पिडाको सिकायत भएपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गराइएको थियो।
चपली हाइटकी हिरोइन विनिता बराल प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा
Thursday, 21 June 2012 11:28	नागरिक
(20 votes, average 2.90 out of 5)
केपी ढुंगाना/स्मृति ढुंगाना, काठमाडौं, असार ७ - यौनको विषयमा बनेको फिल्म चपली हाइटबाट चर्चामा आएकी हिरोइन विनिता बरालसहितका केही कलाकारसँग प्रहरीले बयान लिएको छ। यौन शोषण, धम्की र दुर्व्यवहारको आरोपमा ललितपुर प्रहरी परिसरले उनीलगायत दीक्पाल कार्कीलाई हिजो राति बयानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो।
अक्षयले सिफारिश गरे सोनाक्षी
Wednesday, 20 June 2012 13:13	नागरिक
म्बइ, असार ६ (एजेन्सी)- यतिबेला बलिउडमा सोनाक्षी सिन्हालाई सबैभन्दा 'हट' हिरोइनको रुपमा दरिन थालेकी छिन्। यही कारणले गर्दा केही कैयौं फिल्मकर्मीको नजरमा उनी स्थापित भएकी छन्। अश्विनी यार्डीको ब्यानरमा बन्ने यो फिल्ममा क्याट्रिना कैफ मुख्य भूमिका रहनेछिन्।
तापनि सोनाक्षीको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण हुनेछैन।
टम र केटको पारपाचुके
सेन्सरले ‘लिम्बुवान' मेट्यो
धरावासीको आँसु रोकियो
ऋण बोकाई पूरा भयो 'मुनामदन'
भक्तपुर पाटीमा मैथिली भजन
मोनिका युनुस नेपाल आउँदै
फिल्म समीक्षाः अपवाद
छाडा फिल्म बढेकोमा चिन्ता
ऋचा छक्क परिन्- यो मेरै पेटबाट निस्केको छोरा हो ?
धेरैले पढेको- यो हप्ता